Hafatra avy amin'Andriamanitra amin'ny fitenin'olombelona
" Rehefa nampitenenin'Andriamanitra tamin'ny razana fahiny ny mpaminany tamin'ny andro samy hafa sy ny fanao samy hafa, dia amin'izao andro farany izao kosa no nampitenenany tamintsika ny Zanany, Izay voatendriny ho Mpandova ny zavatra rehetra ; Izy no nahariany izao tontolo izao. "Heb. 1:1,2.
Tsy nomena antsika tamin'ny fiteny tsy takatry ny sain'olombelona ny Baiboly. Tonga olombelona Jesosy mba hanatrarana ny olona amin'ny toerana misy azy. Tsy maintsy nomena tamin'ny fitenin'olombelona ny Baiboly. Izay rehetra an'ny olombelona dia tsy tanteraka. Teny iray ihany no entina anehoana hevitra samy hafa ; tsy mba misy teny iray isaky ny hevitra iray voafaritra tsara. Nomena mba hampiharina ny Baiboly.
Samy hafa ny foto-pisainana. Tsy mitovy ny fahatakaran'ny rehetra ireo fomba fiteny sy fanambarana. Ny sasany mandray ny fanambaran'ny Soratra Masina araka izay maha-mety ny fisainany sy ny momba azy manokana. Ny fandraisana an-tendrony, ny hevitra mibahana mialoha, ary ny fahamaimaizana dia misy akony lehibe manamaizina sy mampikorontana ny saina na dia eo am-pamakiana ny tenin'ny Soratra Masina aza...
Olona nomena tsindrimandry no nanoratra ny Baiboly, fa tsy fomba fisainana sy fitenin'Andriamanitra izany. An'ny olombelona izany, Andriamanitra dia tsy resahina amin'ny maha-mpanoratra azy. Hiteny matetika ny olona hoe tsy mifanaraka amin'Andriamanitra ny filazana toy izao na izany. Tsy nametraka ny Tenany tao amina teny, na rafi-pisainana, na hailahateny hotsaraina ao amin'ny Baiboly Andriamanitra. Mpandray an-tsoratra izay lazain'Andriamanitra ny mpanoratra ny Baiboly fa tsy penin'Andriamanitra. Jereo ny fahasamihafan'ireo mpanoratra. Tsy ny teny ao amin'ny Baiboly no mandray tsindrimandry fa ilay olona no nandray tsindrimandry. Tsy miasa amin'ny teny na ny fomba fitenin'ilay olona akory ny tsindrimandry fa amin'ilay olona, izay miboiboika hevitra ao an-tsainy eo ambanin'ny fitarihan'ny Fanahy Masina. Fa ireo teny kosa dia mandray ny mariky ny fisainan'ny isam-batan'olona. Dia miampita ny fisainan'Andriamanitra. Mitambatra amin'ny fisainan'Andriamanitra sy ny sitrapony ny fisainan'olombelona sy ny sitrapony ; koa dia Tenin'Andriamanitra izany ny fanambarana ataon'ilay olona.